Filannoo prezidaantummaa Ameerikaaf sagalee kennuu yaaddanii beektuu? Radiyoon sagalee Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afriikaa prezidaantiin Ameerikaa inni itti aanu eenyuun akka ta’u ka barbaaddan ta’uu keessan baruu fedha. Filannoon kun kan geggeeffamu demokraaticha prezidaant Baraak Obamaa fi Ripaablikaanticha Miit Raamnii gidduutti. Filannoo prezidantummaa Ameerikaa dhufuuf sagalee keessan kennaa.
Sadaasaa 05, 2012
Baarak Obamaa (D) 97 %
Mitt Raamnii (R) 3 %
Kuni poolii saayinsaawaa odoo in ta'in salphumatti yaada namootaa walitti qabuudhaa dirree qophaahe